Wararkii ugu dambeeyey Villa Somalia iyo xildhibaanno lasoo jebiyey (Xog) - Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyey Villa Somalia iyo xildhibaanno lasoo jebiyey (Xog)
Wararkii ugu dambeeyey Villa Somalia iyo xildhibaanno lasoo jebiyey (Xog)
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Somalia, oo shalay ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, ayaa xalay kullamo xasaasi ah waxa ay isaga iyo saaxiibadiis siyaasadeed ku qaateenxarunta madaxtooyada ee Villa Somalia.
Waxaa kullanka looga hadlay sidii ay u wajihi lahaayeen xaaladda cusub ee soo korartay kadib markii xubno xildhibaanno ah oo gaaraya 130, oo isugu jira kuwa lacag la siiyey iyo caadifad qabiil ay hayso ay dalbadeen is-casilaadda Xasan Sheekh.
Sida xubno ku sugan Villa Somalia ay u sheegeen Caasimada Online, waxa ugu muhiimsan ee kullanka looga hadlay, ayaa ah in la aqoonsado dhammaan xildhibaannada dalbaday is-casilaadda madaxweynaha, si loo ogaado fikradahooda iyo sababta ay is-casilaadda u rabaan, marka laga soo tago wixii ay saxaafadda u sheegeen.
“Waxaa la isku dayayaa in la kala ogaado xildhibaannada is-casilaadda u dalbaday ajendooyin siyaasayeed iyo kuwa la rumeysan yahay inay kuwaas iska raaceen un, ayaga oo lacag doon ah” ayaa laga soo xigtay ilo-wareedyo ku sugan Villa Somalia.
Waxaa la rumeysan yahay in ujeedada qorhahan uu yahay in xildhibaanada la kala jebiyo, oo kuwa lacag doonka ah gooni loo saaro, taasi oo yareyn karta xildhibaanada mucaaradka ah, suurta gelin kartana inaysan awood u yeelan inay ridaan madaxweynaha.
Qorshaha is-casilaadda, ayaa waxaa soo abaabulay xildhibaanno u badan beelaha Kablalax oo lacag badan faruqaya, ayada oo ay ku adeeganeyso dowladda Kenya, sababo la xiriira arrinta Jubbooyinka.
Madaxweynaha ayaa la rumeysan yahay inuu haysto taageerada xildhibaanno la mid ah kuwa codsaday is-casilaadda, waxaana warbixinno cusub ay sheegayaan in qaar ka mid ah kuwii dalbaday is-casilaadda oo aan tiradooda la shaacin ay hadda fikirkooda beddeleen.
Dhinaca kale dhowr xildhibaan ee Hawiyaha ah ee lagu adeeganayo, ayaa hadda la sheegay inay is-ceybsanayaan, oo xittaa qoysaskoodii ay kala kulmeen mucaaradnimo iyo naceyb, kadib markii la ogaaday inay u adeegayaan xildhibaanno diidan horuamrka iyo nabdda magaalada Muqdisho.